Ngaba ubunokuba nobuganga bokwenza umngxunya kwii-AirTag zakho zokuyinxiba ukuxhoma? Ndilungise, ewe | Ndisuka mac
Ngaba ubunokuba nobuganga bokwenza umngxunya kwii-AirTag zakho zokuyinxiba ukuxhoma? iFixit, ewe
Ukuthengiswa kweApple kweAirTags ngaphandle kwamathandabuzo kube yimpumelelo enkulu. Ukongeza kwizixhobo ngokwazo Inkampani yaseCupertino yenza umbulelo wemali kwizincedisi zayo esebenza ngokufanelekileyo ukuphatha ii-AirTags naphina.
Le yinto eyahlula imveliso yeApple kwezinye iimveliso ezifanayo kwaye kukuba umngxunya awongezwanga kwisixhobo ngokwawo ukuwuxhoma, kunyanzelekile ukuba uthenge isixhobo xa ungenayo "ipokotho" yokuyiphatha. Kodwa Kwi-iFixit bafuna ukwenza uvavanyo lokuhlaba enye yezi AirTags ngokubetha okuhle kwaye kunokwenzeka ngaphandle kokonakalisa.
Ngale nto sithetha ukuba sicebisa ukugqobhoza iApple AirTags? Hayi, kodwa okumangalisayo kukuba ngaphezulu kwe-1/4 intshi bakwazile ukugqobhoza ezi AirTags kwaye ngokufanelekileyo bayaqhubeka nokusebenza ngaphandle kwengxaki. Ngaphandle kwekhosi ilahlekelwe kuko konke ukunganyangeki kwamanzi kunye nothuli olunikezelwa zezi zixhobo.
Abanye abasebenzisi bayazibuza ukuba kutheni iApple ingafuni ukuba uphathe iAirTag yakho ngqo ngaphandle kokuthenga isixhobo, kwaye eyona nto iphambili apho, thengisa izixhobo zakho kwaye ufumane imali eninzi.
Sele sikubonile ukudilizwa kwezi zixhobo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ezenziwa yi-iFixit, ngaphakathi koku sifumana ukhetho lokuhlaba i-AirTag kancinci ukuyiphatha ixhonyiwe asikukhuthazi olu khetho konke konke. Kwelinye icala, kuyacaca ukuba abasebenzisi abaninzi bakhetha ukuxelisa okanye izixhobo ezifanayo zokuthatha ezi zixhobo naphina, into iApple nayo inayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngaba ubunokuba nobuganga bokwenza umngxunya kwii-AirTag zakho zokuyinxiba ukuxhoma? iFixit, ewe
Amaqela kaMicrosoft e-macOS kungekudala aza kongeza inkxaso yokurekhoda okuzenzekelayo
Amaxesha okuhambisa: ngoJuni 9-16 kwi-iMac